Sago Mini Disguise Vacheche, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Sago Mini Disguise Vacheche, yemahara kwenguva pfupi
Zvekare tinokuzivisa iwe nezvechikumbiro, mune ino mutambo, uyo kwenguva yakati wandei unowanikwa kurodha mahara. Pane ino chiitiko, tiri kutaura nezvemutambo kubva kukambani Sago Toys, kambani yakanangisa basa rayo kugadzira mafomu evana vadiki mumba, saToca Boa. Ino nguva iko kunyorera kwaanotipa kurodha mahara Sago Mini Inonyengedza vacheche, chishandiso chine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, asi kwenguva shoma inowanikwa kuti utore mahara.
Sago Mini Disguise Babies yakanangidzirwa kuvana vanosvika makore mashanu uye idzo ivo vana vadiki vanopedza maawa vachifara vachigadzira zvipfeko, vachitamba naJack, Jinja, Harvey naRobin. Ichi chishandiso zvakakosha kuti vadiki vatange kudzidza kudzidza kupfeka Naro pacharo, rimwe rebasa rakanyanya kunetsa kwavari, uye ini ndinozviziva kubva pane zvakaitika kwandiri. Nemutambo uyu, vadiki vanoyedza mazana emubatanidzwa pakati pezvipfeko nezvimwe zvinhu, zvakaita semagirazi, ngowani, masharubu ... kuwana mhedzisiro inoratidza kunyemwerera kusinganzwisisike pakati pevadiki.
Uyu mutambo wakanakira vana vari pakati pemakore maviri kusvika mashanu ekuberekwa, zvekuti zvishoma nezvishoma, vanodzidza basa rakaoma rekuzvipfekedza. Kufanana nekushandisa kwese kweiye anovandudza, haudi chero mhando yeWi-Fi yekubatanidza kuti ugone kunakidzwa nayo. Chii chimwe Izvo hazvina chero mhando ye-in-app kutenga, kana kushambadza izvo zvinogona kukanganisa kutariswa kwevadiki. Sago Mini Disguise Babies inoda ingangoita iOS 7.0 kana gare gare, inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch uye inoda kungopfuura 50 MB pane yedu kifaa kuiisa pasina matambudziko.
Sago Mini Anovanza Vachechevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Sago Mini Disguise Vacheche, yemahara kwenguva pfupi
Google Mepu inokuudza kwaunopaka
Iyo Headphone ndiyo mhinduro yaBragi kune AirPods